YHT လေ့လာရေးခရီးစဉ်သည်ဇွန် ၁ ရက်မှစတင်သည်။ ဤတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်နာရီဖြစ်ကြသည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီYHT လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ .. ! ဤတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြသည်
22 / 05 / 2020 06 တူရကီ, 26 Eskisehir, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, နောက်ဆုံးမိနစ်, တူရကီ
coronavirus အစီအမံ၏အတိုင်းအတာအရ YHT လေယာဉ်သည်ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့်စတင်မည်။
coronavirus အစီအမံများအရ YHT လေကြောင်းလိုင်းများသည်အပြန်အလှန်ပျံသန်းမှု ၁၆ ခုမှဇွန် ၁၆ ရက်မှစတင်မည်ဖြစ်သည်။ Ankara-İstanbul, Istanbul-Ankara, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya, Konya-Ankara, Konya-Istanbul, Istanbul-Konya အကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အချို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို "အကူးအပြောင်းကာလ" တွင်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
YHT များသည်ခရီးသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
Unkask ခရီးသည်များကိုရထားသို့ပို့ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။ ခရီးသည်များသည်သူတို့၏မျက်နှာဖုံးများနှင့်အတူလာရမည်။
ခရီးသည်တွေကကြိုတင်လက်မှတ်တွေရကြလိမ့်မယ်။ သူတို့ ၀ ယ်ထားတဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူကအခြားထိုင်ခုံပေါ်မှာခရီးသွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Coronavirus (Covid-19) ကူးစက်ရောဂါအတိုင်းအတာအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များဖြင့်ခရီးသွားလိုသူများအတွက် Hayat Eve Sığar (HEPP) ကုဒ်လျှောက်လွှာကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Fahrettin Koca မှကြေငြာခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီး Koca မှယခုခရီးစဉ်များကို HES ကုဒ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ Hayat Eve Sığar” မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသို့လာမည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိခရီးသည်အားလုံး၏အန္တရာယ်အခြေအနေကိုပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီ ၂၄ နာရီ HEPP ကုဒ်ဖြင့်စုံစမ်းလိမ့်မည်။ ” ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးဌာနမှကိုကိုက“ ဒီ Hayat Eve Sığarလျှောက်လွှာကနေတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအန္တရာယ်မရှိဘူး၊ ဖျားနာနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးလေ့ကျင့်သွားကြသည်။ မိုဘိုင်း application မှသင်ရရှိမည့်ကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ” ဟုပြောသည်။
HES ကုဒ်သည်“ Hayat Eve Sığar” မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့်ကုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤကုဒ်ကို အခြေခံ၍ ဦး စားပေးစိစစ်ခြင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးခရီးသည်ကိုလက်ခံသည်၊ မလက်ခံသည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဤကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ လေယာဉ်နှင့်ရထားခရီးများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဝန်ကြီး Fahrettin Koca; တစ် ဦး ချင်းစီထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်သော HEPP ကုဒ်ကို ၂၀၂၀ မေလ ၁၈ ရက်တွင်မဖြစ်မနေဖြည့်တင်းရမည်။ HES ကုဒ်စုံစမ်းရေးအတွက်၊ ခရီးသည် ID နံပါတ် (TCKN၊ Passport စသည်)၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် (ဖုန်းနှင့်အီးမေးလ်အကွက်နှစ်ခုလုံး) နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်ကိုလိုအပ်သောနေရာများအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မည်။
İZBAN ၀ န်ဆောင်မှုဘယ်နှစ်နာရီစမလဲ။ ဘယ်အချိန်ကုန်ဆုံးလဲ။ ဤတွင် BZBAN 2020 အချိန်ဇယား
နိုဝင်ဘာလ 25 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောင်းရန်မှစတင်ကာ Bursa အတွက်စတင်
Izmir '' ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး '' အလေ့အကျင့်ဧပြီလ 29 မှစ. စတင်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီယနေ့တွင်စတင်ကာပြောင်းလဲ
Izmir အတွက်ဥရောပအာရှရထား 2019 မှစတင်ကာ
ဇူလိုင်လ2Streetcar Mansion စတင်ခြင်း Paid မညျ
မော်စကိုအချိန်ဇန်နဝါရီလမှ 1 2019 ရထားလက်မှတ်စျေးမှစတင်ကာ
TCDD 21 ဇွန်လတွင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွင့်လှစ်
Kozan 82အင်္ကျီလက်စမတ်လမ်းဆုံဇွန်လတွင်ဖွင့်လှစ်
Istanbul Ankara YHT လက်မှတ်စျေးနှုန်းများအချိန်ဇယားနှင့်အချိန်ဇယား
TCDD သည် ၀ ယ်ယူထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်စက်သမား၏အခြေအနေများကိုကြေငြာခဲ့သည်
အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးပြုလုပ်ခြင်း YHT Start ကို Eryaman YHT ဘူတာပါပြီ
Eskisehir နှင့် Konya (YHT) လှုပ်ရှားမှုများအကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစတင်နေကြသည်။